Astaamaha ugu muhiimsan ee sharaabaadyada ragga | Ragga Caqliga leh
Ragga Stylish | 13/08/2021 00:38 | Calzado, fashion
In kasta oo ilaa dhowr sano ka hor sharabaadyada loo tixgeliyey dhar ku dhawaad ​​aan muhiim ahayn, runtu waxay tahay inay miisaan aad u badan ku heleen adduunka moodka, gaar ahaan haddii aan ragga ka hadalno. Waxaan kuu sheegi doonnaa waxay yihiin astaamaha ugu muhiimsan taas oo ay tahay inaad fiiriso ka hor intaadan iibsan sharabaadada ragga.
1 Qaababka iyo naqshadaha
2 Noocyada sharaabaadyada
Qaababka iyo naqshadaha
Markii hore raggu marwalba waxay xidhaan sharabaaddo madow ama caddaan ah, laakiin maanta way ka sii baahsan yihiin dhammaan noocyada midabada, naqshadaha iyo qaababka. Haddii aad xiran karto jaakad xarrago leh ama jaakad, maxaa diidaya sharaabaad?
Tilmaamahan wax badan kama talin karno maadaama aan tusi karno ikhtiyaarrada qaarkood si aad u doorato midka kugu soo jiidashada badan, maadaama waa arrin dhadhan.
Majirto sharaabaado midab -kala -duwan leh, oo leh sawirro, weedho ama xitaa sawirro leh. Baashaalku waa inuusan la jaanqaadin moodada iyo sharaabaadku waa dhar wanaagsan oo kor loogu qaadayo, waa inaad waxoogaa mala -awaal ah gelisaa. Dhab ahaantii, Daabacaadda waad awoodaa abuuro sharabaado caadadii ugu asalka ahayd. Waa hab wanaagsan oo sharaabaadyadu inaan la dareemin, laakiin inay noqdaan xiddigaha dhabta ah ee muuqaalkaaga.
Iyadoo ku xiran dhererka bakooraddii ay haysteen, waa la kala saari karaa in pinkies, anqlets, caadi ah iyo dheer, oo ka mid ah cabbirrada kale. Mid ama kan kale ayaa loo adeegsan doonaa iyadoo ku xiran dharka la xirto, kabaha, isticmaalka la siiyay iyo xilliga aan joogno.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa hagaajiyay, taas oo ah xadka uu sockku ku habboon yahay agagaarka cagta. Haddii ay aad u dheer tahay, waxaa jiri doona laalaab Haddii ay aad u gaaban tahay, sharaabaddu waxay hoos joogi doontaa ciribtaada. Si aad u hubiso in sharaabaddu si fiican ugu habboon tahay cagtaada, waxaa fiican inaad isku tijaabiso kabahaaga. Sidoo kale, marka aad dooranaysid cabbirka marada, maanka ku hay in cabbir kasta sida caadiga ah ay ku jiraan laba ama saddex cabbir oo kabo ah.
Ugu dambayntii, marka aad aaddo si aad u iibsato sharabaaddo cusub, ogow taas tol ma laha Ama, ugu yaraan, in tolluhu ay siman yihiin. Haddii kale, is -maandhaafka dhaca intaad socotid wuxuu u horseedi karaa jajab iyo finan.
In kasta oo dhammaan agabyadu ay u ekaan karaan kuwo isku eg, haddana waxay kaalin aad u muhiim ah ka ciyaaraan sharabaadyada. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof dhidid badan, waa inaad ku fikirtaa a wax neefsan kara oo aan simbiriirixan Waxay ka hortagi doontaa in cagtu ku socoto gudaha kabaha ama dhididka oo qoynaya sharaabka, taas oo keeni karta ur xun.
Sidaa darteed, dharka isku-darka ah waxay noqon karaan kuwo aad waxtar u leh marka la barbar dhigo suufka, oo inta badan ah midka ugu badan. Sidoo kale, wax badan tayada haysato maaddada, cimriga sokortu wuu dheeraanayaa Waxaa la doorbidayaa in jeebkaaga wax yar la xoqo oo ay sii dheeraadaan. Dhinaca kale, xilliga jiilaalka waxaan xiisayn doonaa agabka dhumucda iyo diirran, sida dhogor ama kaash.
Sidaad arki karto, sharaabaadku waxay leeyihiin tayo aad uga badan intaad malayn karto ka hor intaadan akhrin maqaalkan. Dib u eeg mid kasta oo iyaga ka mid ah ka hor intaadan iibsan lammaane cusub waana hubaal inaad si fiican u hagaajin doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Astaamaha ugu muhiimsan ee sharabaadyada ragga